Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmi doona dhiggiisa Kenya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo la kulmi doona dhiggiisa Kenya
March 9, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
MadaxweyMadaxweynaha Soomaaliya oo la kulmi doona dhiggiisa Kenyanaha Soomaaliya oo la kulmi doona dhiggiisa Kenya. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aqbalay martiqaad uu u fidiyay dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyata in uu Nairobi booqasho ku tago.
Martiqaadka ayaa waxaa u gudbiyay wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred Matiang’I kaasoo safar ku yimid Muqdisho Axadii. Balse lama sheegin wakhtiga uu noqon doono safarka Madaxweyne Farmaajo uu ku tagi doono Kenya.
Asbuucii hore, Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa wadahadal ku yeeshay khadka taleefoonka waxayna isku afgarteen in ay ka wada shaqeeyaan sugida xuduuda u dhaxeysa labada dal.